Sadaasa 29: Waltajjii aadaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa itti calaqqisu
Sadaasa 29: Waltajjii aadaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa itti calaqqisu Featured
Sadaasni 29 guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa ta'ee kabajamuu kan eegala bara 1999 yoo ta'u, barana yeroo 12faf naannoo Affaar, Magaalaa Samaraatti kabajama. Guyyaa kana saboonni, sablammootniifi ummattoota biyyattii waltajjii tokko irratti walarguun aadaa uffannaa, faayaa, sirbaafi ragadasaanii kan itti calaqqisiisaniidha. Ayyaanichi ummata gidduutti hariiroo gaarii uumuun gamatti aadaafi seenaa sabootaafi sablammootaa guddisuu, beeksisuufi babal'isuu keessatti tumsa olaanaa taasisaa jira.
Afyaa'iin Mana Maree Federeeshinii, Obbo Yaalawu Abaataa guyyaa Saboota, Sablammootaafi Ummattoota biyyattii barana yeroo 12faf kabajamu ilaachisuun ibsa torban darbe gaazexeessitootaaf kennaniin akka jedhanitti, abbootiin amantii, jaarsolliin biyyaa, dargaggoonni, dubartoonni, gaazexeessitoonniifi aartistoonni biyyattii sirna kabaja ayyaanichaa irratti ni argamu. Gaazexeessitoonnis seenaa, aadaafi duudhaa naannichaa hawaasa biyyattiifi addunyaa biraan ga'uun gahee irraa eegamu akka bahatan gaafataniiru.
Ayyaanichi ummata biyyattii gidduutti tokkummaa, walitti dhufeenya gaarii, walamantaa, waldanda'uufi walkabajuun akka jiraatu taasiseera kan jedhan Obbo Yaalawu, waltajjiin kun aadaafi duudhaaleen sabootaafi sablammootaa kan itti beekaman, eegamaniifi kunuunfamanii dhalootaa dhalootatti dabarsuuf gargaara. Hirmaattonni ayyaanichaas waggaa waggaan daran dabalaa jira jedhu.
Guyyaan Saboota, Sablammootaafi Ummattoota Itoophiyaa kun manneen barnootaa keessatti kabajamaa waan jiruuf dhaloonni bor biyyattii dhaalu aadaafi duudhaasaa qabatee akka guddatuufi eegee dhalootaa dhalootatti akka dabarsuuf kan gargaaru ta'uu himu afyaa'ichi.
Walumaagalatti Sadaasni 29 guyyaa aadaafi duudhaaleen saboota, sablammootaafi ummattoota biyyattii waltajjii tokkorratti dhiyaatuufi haala gaarii biyyattii ijaaruu keessatti gumaacha olaanaa qabu waan ta'eef qophiileen ayyaanichaaf taasifaman marti cimanii itti fufuu qabu.
Torban kana/This_Week 43224
Guyyaa mara/All_Days 1468004